PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - Iyaveva indodana yesalukazi esishayiwe
Iyaveva indodana yesalukazi esishayiwe
Idedelwe ngebheyili intombazane ebhaxabula isalukazi kwi-video
Ilanga langeSonto - 2018-08-26 - Front Page - THANDEKA NGOBESE NOJOHN HLONGWA
IBHODLA umlilo indodana yowesifazane wasematshamhlophe, ehluhluwe, okusabalele i- video yakhe ezinkundleni zokuxhumana ebhaxabulwa ngenduku yintombazane, imsola ngokuyithuka ayibize ngesifebe.
Umnu Vusi Ntombela (28) ( osesithombeni) uyindodana endala kankz Cabangile Ngcobo (69) obonakale ebhambabulwa ngumsolwa, umbali Buthelezi (19), oboshwe wadedelwa ngebheyili yamahhala ngolwesine. Ekhuluma NELANGA Langeso
nto uvusi uthi uke wafikelwa wumcabango wokuba azibambele mathupha kule ntombazana kodwa wabuye wazikhuza ngoba esaba umthetho.
“Le ngane eshaya umama kanje- na ikhulele phambi kwami. Incane kabi, kayingelami ngisho ukungelama. Umama engitshela ocingwe- ni ukuthi usevelelwe yinkinga yokushaywa wumbali ngenduku futhi usekhwehlela kuphume igazi, bengingazitsheli ukuthi isimo sakhe sibi kanjena. Ngivele ngathi makayobika enduneni.
"Kuthe sengibona i- video komunye uzakwethu emsebenzini kwangavuma nokuba ngisebenze, inhliziyo iqaqamba. Ngithe uma ngibatshela ozakwethu ukuthi ngumama wami lo okwi- video, bethuka bathi mangicele emsebenzini ngiyobheka isimo ekhaya.
"Abelungu (umqashi) bavele banginika isonto bathi mangiyophumula ekhaya isimo size sibe ngcono.
"Ngifika, umama ubengakwazi ngisho ukwenzani. Ezingalweni lapho abembhonya khona umbali bekunezigaxa zesishashazi ezimnyama. Ngisola ukuthi igazi belimile lingakwazi ukudlula njengoba wophele ngaphakathi.
"Kusize ukuthi ngimthobe maqede ngamurabha ukuze kube ngco- nywana,” kusho umnu Ntombela.
Uthi akakhathali noma kuthiwa unina ubetheni kunkz Buthelezi, bekungafanele ukuthi ambeke isandla emdala kangaka.
“Isenzo sakhe kasigcini ngokukhombisa ukungahloniphi umama kodwa udelela kwathina singabantwana bakhe nomndeni wethu imbala. Ngimdala ngingaka nje angikakaze ngiyizwe into enje, ngiphoxekile futhi ngidiniwe,” kusho yena.
Unkz Ngcobo uthi le ngane emshaye waze wabuya esibhedlela ikhuliswe nguyena njengoba beyizihlobo zegazi.
Uthi yize le ntombazana imshaye kanje kodwa kumphatha kabi ukuthi isize yabuya ezikhindini ngoba kufana nokuthi iyingane yakhe. Umbali uzophinde avele enkantolo yemantshi ehluhluwe mhlaka-18 enyangeni ezayo.